घोराही–तुलसीपुर जोखिमपूर्ण यातायात सेवा - साक्षी खबर घोराही–तुलसीपुर जोखिमपूर्ण यातायात सेवा - साक्षी खबर
माघ २९, २०७६ | ७६६ पटक पढिएको | साक्षी खबर
२९ माघ, बिजौरी /स्थानीयलाई त जानकारी होला, तर नयाँ चालकहरु घोराही–तुलसीपुरको यात्रामा सावधान हुनुहोला । किनकि दुई लेनको सडकलाई चारलेन बनाउने क्रममा सडक अस्तव्यस्त छ, अनि यात्रा जोखिमपूर्ण ।
शनिबार दिउँसोको सामान्य झरीमा यसै सडक खण्डको सक्रामखोला पुलमा कम्तिमा आधा दर्जन मोटरसाईकल सडकमै चिप्लेर पल्टे । यसै क्रममा मानवअधिकारकर्मी केशव कुमार शर्माको हातको औला भाँचियो । अन्य सामान्य घाइते भए । किनकि निर्माण कम्पनीले सडक चौडा बनाउने क्रममा सडकैभरी माटो फिजाएको थियो । त्यो पनि स्पीड ब्रेकरको उद्देश्यले । मोटरसाइकल चालकहरु सम्हालिनै सकेनन् ।
एक साता अघि विहानको कार्यालय समयमा करीव एक घण्टा सडक जाम भयो । बिजौरीको सृजना वालवालिकामा वोर्डिङ स्कुलमा पढाउने शिक्षिका एक घण्टा ढिलो विद्यालयमा पुगिन् । त्यहाँ उनलाई ढिलो पुगेकोमा आफैलाई हिनताबोध भईरहेको थियो । त्यसदिन त्यस क्षेत्रका न कर्मचारी समयमै कार्यालय पुगे, नत विद्यार्थीहरु नै समयमै विद्यालय पुगे, स्कुल बस समेत जाममा परे । करिव दुई साता अघि भ्रमण वर्ष २०२० को सन्दर्भ पारेर तुलसीपुर र घोराही आवतजावत गर्ने क्रममा हेमन्तपुरमा सडक पुरै खनेर ह्युमपाइप बिच्छाइंदै थियो । यसका विषयमा जिल्ला ट्राफिक कार्यालयलाई समेत जानकारी दिइएको थिएन्, उपर्युक्त डाइभर्सन पनि बनाइएको थिएन । यातायातका साधनहरु हेमन्तपुर चौकबाट मानपुर छिचोल्दै तुलसीपुरको महेन्द्र हाइस्कुल हुँदै तुलसीपुर बजार पुग्न बाध्य भए । ‘अस्पतालमा पनि समयमा पुग्न सकिएन त्यो दिन, किनकि धेरै बाटो घुम्नुपर्याे’, निजी कारमा घोराहीबाट तुलसीपुर जाने प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरका मेसु डा. प्रताप पोख्रेलले भने ।
करीव दुई महिना अघि सडक किनारामै थुपारीएको निर्माण सामग्रीमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा औषधि उपचारका लागि तुलसीपुर जाँदै गरेकी पवित्रा डाँगीको फोर्टिनाइन चोकमै दुर्घटना भयो, उपचारका क्रममा उनको निधन भयो । यी प्रतिनिधिमुलक उदाहरण मात्रै हुन् । सडक स्तरोन्नतिका क्रममा सडकमै निर्माण सामग्री थुपारेको देख्दा जो कोही पनि खिन्न हुन्छन् । नागरिकहरुले उठाएका आवाज सुन्ने सरोकारवाला निकाय छैनन् । अहिले पनि सडक पुरै अवरुद्ध हुने गरी ह्युमपाइपहरु बिच्छाइंदै छ, तर उपयुक्त डाइभर्सनको व्यवस्थापन गरिएको छैन । सबैभन्दा बढी समस्या दुधरासदेखि बिजौरीसम्म रहेको छ भने सर्रादेखि घोराहीसम्मको सडक खण्ड समेत प्रायः वनवेको अवस्थामा छ ।
ट्राफिकको पटक पटकको आग्रहलाइ निर्माण कम्पनीले सुनेको छैन । विकल्प नभएको अवस्थामा सडक किनारामा निर्माण सामाग्रि राख्नु स्वाभाविकै हो, तर विकल्प भएको अवस्थामा पनि सहजताका लागि सडक किनारामै निर्माण सामग्रीहरु राखिनु अत्यन्तै गम्भीर विषय हो । ‘मैले आफै पनि पटक पटक सम्बन्धित क्षेत्रमै पुगेर साइट हेर्ने व्यक्तिलाई भनें, तर टेरेको अवस्था छैन’–जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रेमराज रेग्मीले भने, यो विषयमा निर्माण कम्पनी कत्ति पनि गम्भीर देखिएन । विकासका क्रममा सामान्य समस्या हुनु स्वाभाविकै हो, तर समस्याका नाममा दिनदिनै दुर्घटनाको जोखिम बढ्नु अत्यन्तै दुःखद अवस्था हो’–मानव अधिकारकर्मी केशव कुमार शर्माले भने । एक दुई दिनको काम भए सडक बन्दै भए पनि केही हुने थिएन, तर कम्तिमा ४ वर्ष यो नियति भयो भने धेरै गम्भीर दुर्घटनाहरु हुन सक्ने पनि उनको अभिव्यक्ति थियो । सबैभन्दा बढी मुस्किल मोटरसाईकल चालकहरुलाई परेको छ । वर्षातमा हिलाम्मे र हिउँदमा धुलाम्मेको नियति रोकिएको छैन ।
विकल्पका रुपमा घोराही तुलसीपुरको बैकल्पिक सडकको सामान्य स्तरोन्नति गरे घोराहीको पुरानो सेनाको व्यारेकदेखि हापुर हुंदै तुलसीपुरको रक्षाचौरसम्म सडक खुल्न सक्थ्यो, तर यो विषयमा यहाँका स्थानीय सरकार र सरोकारवाला कुनै पनि निकाय गम्भीर छैनन् । अर्को विकल्प कुईरेपानीदेखि धारपानी हुँदै फुलबारी जोड्ने दामोदर सडक पनि हुन सक्थ्यो, यो विषय पनि अहिले गुमनामको अवस्थामा छ । सडकमा सबैभन्दा बढी समस्या टिप्परका कारण भएको छ । टिप्परलाई बैकल्पिक बाटो दिन पनि स्थानीय सरकार हैसियत राख्दैन । निर्माण कम्पनी तथ्य कन्सट्रक्सन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी मुम्बइमा छ । स्थानीय प्रतिनिधि जनसम्पर्कमै हुँदैनन् । कसले सुल्झाउने यो समस्या ? कतै आफै नमरी स्वर्ग देखिन्न भन्छन् नी ? जो सुकै पनि दुर्घटनाको सिकार बन्न सक्छन्, सावधान । घोराही–तुलसीपुर यातायात सेवा जोखिमपूर्ण छ ।